Baanuu oo dhaliyey Goolkiisii ugu horreeyey Horyaalka Soomaaliya – Mogadishu City Club
Baanuu oo dhaliyey Goolkiisii ugu horreeyey Horyaalka Soomaaliya
By Mogadhiso | 30/03/2019
Ciyaaryahanka daafaca dhexe ugu ciyaara kooxda Muqdisho City Club ee Axmed Cabdulahi Cabdi (Baanuu) ayaa maalintii shalay aheyd waxa uu dhaliyay goolkiisii ugu horreyay horyaalka kaddib muddo 3-sano ah oo uu ku sugan yahay kooxdan.
Kooxaha Muqdisho City Club iyo Jaziira Sports Club ayaa shalay wax ay kuwada ciyaareyn garoonka Koonis ciyaar qeyb ka aheyd Horyaalka Somali Premier League, xilli Muqdisho City Club ay ku adkaatay 5-2, waxaana xusid mudan in Baanuu uu dhaliyay goolka shanaad ee kooxdiisa.
Axmed Cabdulahi Cabdi (Baanuu) ayaa xirfadiisa heerka sare ee kubadda cagta waxa uu ka soo bilaabay heer Degmo isagoo u soo ciyaaray Degmada Hiliwaa sanadkii 2015-kii ayuuna qeyb ka ahaa wiilashii matalay Degmadaas.
Kaddib Bandhigii wacnaa uu ka sameyay Tartankii Maamul Goboleedyada, waxaa xiddigan heshiis kala saxiixatay kooxda Muqdisho City Club oo markaas lo oran jiray Banaadir Sports Club, isagoo iminka qeyb ka ah xiddigaha udub dhexaadka u ah kooxdan.
Intii uu ku sugna kooxdan Muqdisho City Club, waxa uu kula guuleystay Koobab ka kala ah General Daa’uud iyo Super Cup-ka dalka.
Xiddigan ayaa sidoo kale nasiib u yeeshay inuu metelo xulka qaranka markii ugu horreysay ee xulka looga yeeray waxay ahayd sanadkii 2016-kii, laakiin sanadkii xigay ee 2017-kii ayuu xirtay maaliyadda qaranka, illaa iminkana waxa uu qeyb ka yahay xiddigaha xulka ee Ocean Stars.
Kaddib Goolkiisii ugu horreyay markii uu u dhaliyay kooxdiisa Muqdisho City Club, wuxuu ka hadlay dareenkiisa isagoo yiri: “Dareenkeyga ma’ahan mid la qiyaasi karo, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhaliyo goolkeygii ugu horreyay horyaalka.
“In aad gool u dhaliso kooxdaada waa wax weyn, waxaan rajeynayaa inaan sii wado gool dhalintayda oo aan kooxdeyda ka caawiyo sidii ay ugu guuleysan lahayd horyaalka iyo koobabka kale ee maxaliga ah.”
Si kastaba ha ahaatee, ma’ahan markii ugu horreysay ee muddo dheer kaddib uu xiddig gool u dhaliyo kooxdiisa kulammada horyaalka, waxaana horay sidaan u sameeyey John Obi Mikel oo kooxdiisa Chelsea kulammada horyaalka oo dhan hal gool u dhaliye